Fiarovana ny fari-dranomasina : Efa vonona i Madagasikara -
AccueilSongandinaFiarovana ny fari-dranomasina : Efa vonona i Madagasikara
Herintaona aty aoriana nametrahana ny ivontoerana iraisam-paritra momba ny fanangonam-baovao eny an-dranomasina (CRFIM) dia nanamafy ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny Praiministra lehiben’ny governemanta, Solonandrasana Mahafaly Olivier fa tena vonona i Madagasikara amin’izay ady hatao amin’ny olana rehetra eny an-dranomasina amin’ny alalan’ity ivontoerana ity. Ary tsy ny fari-dranomasintsika ihany fa ny fari-dranomasina rehetra manodidina antsika, satria marihina fa mandalo aty amin’ny fari-dranomasin’i Madagasikara avokoa ny sambo lehibe rehetra mivezivezy aty amin’ny faritry ny ranomasimbe Indianina. Ny CRFIM izay ivontoerana iray hahafahana mitily, hahafahana misoroka ary hahafahana mandray an-tanana avy hatrany ireny ady amin’ny jiolahin-tsambo. Ny CRFIM ihany koa dia ivondronan’ny AFOA-OI na ny firenena aty amin’ny afrika tatsinanana sy Aostraly ary ny ranomasimbe indianina fa ny firenena malagasy no mampiantrano azy. Manoloana izay indrindra, mitaona ireo mpiara-miombon’antoka rehetra ny lehiben’ny governemanta, Solonandrasana Mahafaly Olivier, mba hanampy an’ Madagasikara amin’ny fametrahana ny fanamafisana olona sy ny mpikambana ao amin’ity ivontoerana ity.
Marihina anefa fa efa manampy antsika ny vondrona Eoropeanina, ny firenena frantsay sy britanika. “Voninahitra ho an’ny firenena malagasy ny mampiantrano ity ivontoerana ity izay hahafahantsika manampy amin’ny fiarovana ny fari-dranomasintsika. Tsy ny fari-dranomasin’i Madagasikara ihany no arovana ao anatin’io fa misitraka ny fananana ity ivontoerana ity avokoa izao tontolo izao satria misy fiantraikany amin’izao tontolo izao ny zavatra rehetra mitranga eny an-dranomasina eny na amin’ny lafiny toekarena na tranga mety hampidi-doza eo anatrehan’ny jiolahim-tsambo, jono tsy ara-dalàna, ny olona miditra an-tsokosoko eto amintsika”, hoy ny fanazavan’ny Praiministra, Solonandrasana Mahafaly Olivier.
Ao anatin’ny fiarovana ny fari-dranomasina izay hatrany, nisy ny fanambarana tamin’ny fomba ofisialy teny amin’ny ministeran’ny Raharaham-bahiny ny tetik’asan’ny CRFIM, omaly, izay natrehin’ny lehiben’ny governemanta, ireo mpikambana sasantsasany ao amin’ny governemanta sy ireo mpiara-miombon’antoka rehetra. Nazavain’ny tale jeneralin’ny CRFIM tamin’izany fa io no fitaovana hahafantarana betsaka ny zava- misy eny an-dranomasina. “Azo atao ny mijery ny zavatra rehetra an-dranomasina eo noho eo hahafahana indrindra indrindra miady amin’ny asan- jiolahy an-dranomasina isan-karazany, ny fanondranana ny harem-pirenena. Amin’ny alalan’io no hahafahana mamolavola tetik’asa amin’ny fampiasana ny aterineto, ny fitaovana elektronika eny an-dranomasina, ny fijerena amin’ny alalan’ny zanabolana eny an-dranomasina, entina hanomanana ny hetsika hanenjehana ireo mpanao ratsy”, hoy ny Capitaine de Fregate, Randrianantenaina Jean Edmond, tale jeneralin’ny CRFIM.
Niompana betsaka amin’ny lafiny ara-toekarena ny fihaonana maro izay natrehin’ny Filoham-pirenena malagasy tany Abidjan, ka maro ireo tombony izay ho azon’ i Madagasikara amin’izany. Anisan’ny nihaona tamin’ny Filoha malagasy ihany koa mantsy ny filoha tale ...Tohiny